Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tsy misy rahonana tsunami intsony any Hawaii, Guam, Saipan
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Guam • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao • Safety • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny horohoron-tany 8.2 dia azo heverina ho lehibe amin'ny fenitra rehetra. Horohoron-tany fotsiny no refesina teny amoron'ny Ranomasimbe Alaska ary mety hiteraka tsunami ho an'i Guam sy Saipan.
Nijanona ny fiambenana tsunami manerana ny Pasifika taorian'ny horohoron-tany lehibe 8.2 Alaska
Andian-horohoron-tany lehibe ankehitriny no mampihorohoro ny Saikinosin'i Alaska.
Ny horohoron-tany lehibe indrindra dia voadona tamin'ny 10:15 alina tamin'ny ora teo an-toerana tamin'ny herin'ny 8.2, EST 2:15 maraina.
Ny fampitandremana tsunami dia napetraka ho an'ny ampahany amin'ny morontsirak'i Alaska, navoaka ny tsunami ho an'i Hawaii, ny mpanolotsaina ho an'ny faritra hafa, ary ny rahona tsunami ho an'i Guam sy Saipan dia eo ambany fanadihadiana. Natolotry ny USGS ny angona tsunami natolotry ny USGS firenena hafa
Vao namoaka vinavina ny USGS fa ny onja tsunami mandrahona ny morontsiraka manerana ny Oseana Pasifika dia ambany noho ny 0.3 metatra ambonin'ny onja.
Niala tamin'io ny fiambenana tsunami ho an'i Hawaii. Nisy ny fanambarana navoaka fa tsy misy rahona tsunami intsony ho an'i Guam, Saipan ary ny nosy manodidina.
Any amin'ny toeran-kafa dia fantatra fa mitongilana avo hatrany amin'ny 100 metatra ny tsunami.Metatra 30). Ny ankamaroan'ny tsunami dia mampiakatra ny ranomasina tsy mihoatra ny 10 metatra (3 metatra). Niteraka onja nahatratra 30 metatra (9 metatra) ny tsunami nataon'ny ranomasimbe Indianina tany amin'ny toerana sasany, raha ny fampitam-baovao.
Vaovao tsara ity maminavina ny tsunami mahery vaika mety tsy ho zava-misy taorian'ny horohorontany nahatratra 8.2 tany Alaska androany alina.
TSUNAMI WAVES dia tombanana ho latsaky ny 0.3 metatra ambonin'ny onja any: AMERIKANINA SAMOA ... AUSTRALIA ... CHILE ... CHINA ... CHUUK ... COLOMBIA ... COOK ISLANDS ... COSTA RICA ... ECUADOR ... EL SALVADOR ... FIJI ... FRANTSAY POLYNESIA ... GUAM ... GUATEMALA ... HAWAII ... HONDURAS ... HOWLAND AND BAKER ... INDONESIA ... JAPAN ... NOSY JARVIS. .. JOHNSTON ATOLL ... NOSY KERMADEC ... KIRIBATI ... KOSRAE ... Nosy MARSHALL ... MEXICO ... Nosy MIDWAY ... NAURU ... KALEDONIA vaovao ... ZEALANDA vaovao ... NICARAGUA. .. NIUE ... NORTHERN MARIANAS ... NORTHWESTERN HAWAIIAN ISLANDS ... PALAU ... PALMYRA ISLAND ... PANAMA ... PAPUA NEW GUINEA ... PERU ... PHILIPPINES ... PITCAIRN Island ... POHNPEI ... RUSSIA ... SAMOA ... NOSY SOLOMON ... TAIWAN ... TOKELAU ... TONGA ... TUVALU ... VANUATU ... Mifoha NY NOSY ... WALLIS SY FUTUNA ... ARY YAP. * FAHAMARINAN-TENY AMIN'NY COAST dia mety miovaova amin'ny toetr'andro mialoha ny toetrandro noho ny toetr'andro sy ny endrika eo an-toerana. AO AMIN'NY MAXIMUM MAUNIMIMUMA TSUNAMI AMPLITUDES ATOLLS AND ON LOCATIONS WITH FRINGING NA BARRIER REEFS dia toa kely kokoa noho ireo indostrialy mialoha. * HO AN'NY TOERANA REHETRA REHETRA NOHON'NY PRODUKTY ITY, TSY MBOLA NORATANA NY VOAVITRA. HORAISANA NY VOAFITSARANA RAHA MBA TSY MAINTSY AMIN'NY Vokatra manaraka.
Ny horohoron-tany dia nitranga tany amin'ny saikinosy Alaska tamin'ny 4:16 hariva CHST ny alakamisy 29 jolay 2021. Fampandrenesana tsunami amin'izao fotoana izao no ambara ho an'ny Amchitka Pass, Alaska (125 kilaometatra avaratr'i Adak), Samalga Pass, Alaska (30 kilaometatra any atsimo atsinanan'i Nikolski ). Navoaka tamin'ny 7/28/2021, 9:01:58 hariva ity.
Fampitandremana ho an'ny tsunami amin'ny vokany; * ALASKA ATSIMO SY NY ALASKA PENINSULA, morontsiraka Pasifika manomboka amin'ny Hinchinbrook Entrance, Alaska (90 kilaometatra atsinanan'i Seward) ka hatrany Unimak Pass, Alaska (80 kilaometatra avaratr'i Unalaska) Samalga Pass, Alaska (80 miles SW of Nikolski) Torohevitra momba ny tsunami amin'ny vokany; * ALASKA ATSIMO, ny morontsiraka anatiny sy ivelany hatrany Cape Decision, Alaska (30 miles SE of Sitka) ka hatrany Cape Fairweather, Alaska (85 miles SE atsinanan'i Yakutat) * ALASKA ATSIMO ARY NY PENINSULA ALASKA, morontsiraka Pasifika avy any Cape Fairweather, Alaska (80 miles SE of Yakutat) to Hinchinbrook Entrance, Alaska (80 miles E of Seward) * ISLANDS ALEUTIAN, Samalga Pass, Alaska (90 miles SW of Nikolski) to Amchitka Pass, Alaska (30 miles W of Adak) along the Pribilof Islands Actions to miaro ny ain'ny zanak'olombelona sy ny fananany dia tsy mitovy amin'ny faritra fampitandremana tsunami sy ao amin'ny faritra misy ny torohevitra momba ny tsunami.
Raha any amin'ny faritra fampitandremana tsunami ianao; * Mialà any anaty tany na any amin'ny toerana avo any ambony sy mihoatra ireo faritra natokana ho an'ny tsunami, na mifindra any amin'ny rihana ambony amin'ny rihana misy rihana arakaraka ny toe-javatra misy anao.
Raha any amin'ny faritra fampitandremana tsunami na faritra mpanolo-tsaina ianao; * Mivoaha avy ao anaty rano, miala amin'ny morontsiraka, ary manalavitra ny seranan-tsambo, an-dranomasina, renirano, bay ary fidirana.
* Mitandrema ary araho ny torolàlana avy amin'ny tompon'andraikitra vonjy taitra eo an-toerana satria mety manana fampahalalana amin'ny antsipiriany na manokana momba ny toerana misy anao izy ireo.
* Raha mahatsapa horohoron-tany mahery ianao na mihodinkodina any an-tany dia miarova haingana, toy ny famindrana mankany anaty sy / na ny fiakarana an-tongotra.
* Mpikirakira sambo, * Raha avela ny fotoana sy ny fepetra, alefaso any an-dranomasina ny sambonao ho amin'ny halalin'ny farafahakeliny 180 metatra.
* Raha misoroka any amin'ny ranomasina ny fidirana amin'ny rano marivo, seranan-tsambo, marinas, bay ary fidirana mba hisorohana ny potipoti-drano sy tototry ny rano ary ny onja mahery.
* Aza mankany amoron-tsiraka hijery ny tsunami.
* Aza miverina any amin'ny morontsiraka raha tsy efa nambaran'ny tompon'andraikitra vonjy maika eo an-toerana fa azo antoka izany.
Fiantraikany ------- Ny fiatraikany dia samy hafa amin'ny toerana samihafa amin'ny fampitandremana sy amin'ny faritra misy ny torohevitra.
Raha any amin'ny faritra fampitandremana tsunami ianao; * Mety hisy tsunami misy onja manimba sy onja mahery.
* Azo atao ny tondra-drano amoron-dranomasina miverimberina rehefa tonga eny amoron-dranomasina ny onja, mihetsika hidina anaty tany, ary miverina mankamin'ny ranomasina.
* Ny onja mahery, tsy onja ary tondra-drano an-tanety no mety maty an-drano na handratra ny olona ary hampihena na hanimba ny rafitra eny ambonin'ny tany sy anaty rano.
* Ny rano feno potipoti-drano mitsingevana na rendrika izay mety handratra na hahafaty olona ary hampalemy na hanimba trano sy tetezana dia azo atao.
* Mety ho manimba indrindra ny onja sy onja mahery sy tsy mahazatra ao amin'ny seranan-tsambo, an-dranomasina, bay ary fantsona.
Raha any amin'ny faritra mpanolo-tsaina tsunami ianao; * Azo atao ny tsunami misy onja mahery sy onja mahery.
* Ny onja sy ny onja dia mety rendrika na handratra ny olona ao anaty rano.
* Mety hampidi-doza indrindra ny onja eny amoron-dranomasina sy any amin'ny seranan-tsambo, an-dranomasina, bay ary fidirana.
Raha any amin'ny faritra fampitandremana tsunami na faritra mpanolo-tsaina ianao; * Ny fiantraikany sasany dia mety hitohy mandritra ny ora maro hatramin'ny andro aorian'ny fahatongavan'ny onja voalohany.
* Ny onja voalohany dia mety tsy ny lehibe indrindra ka mety ho lehibe kokoa ny onja any aoriana.
* Ny onja tsirairay dia mety haharitra 5 ka hatramin'ny 45 minitra rehefa manitsoka sy mihena ny onja.
* Tandindomin-doza ny morontsiraka manatrika ny làlana rehetra satria afaka onja manodidina ny nosy sy ny tendrontany ary hantsana ny onja.
* Ny fikororohana mafy na ny fihodinan'ny tany dia milaza fa nisy horohoron-tany ary mety ho avy ny tsunami.
* Ny morontsiraka mihemotra haingana na mihena, onja sy feo tsy mahazatra ary onja mahery dia famantarana ny tsunami.
* Ny tsunami dia mety hiseho toy ny rano miakatra haingana mankany an-dranomasina, onja miakatra moramora toy ny safo-drano tsy misy onja tapaka, toy ny andiana onja tapaka, na rindrina misy rano be.
tsunami.gov Raha mila fanazavana fanampiny.
Tsy misy atahorana intsony ny fiantraikan'ny tsunami amin'ny faritra any Guam Saipan sy Hawaii. Nofoanana ny fiambenana tsunami ho an'i Hawaii
Ny toerana nisy ny horohorontany dia 5.5 Avaratra, 157.9 Andrefana. 11 kilaometatra ny halaliny.
Tsy misy ny simba na ratra antenaina amin'ny faritra rehetra any Alaska amin'izao fotoana izao. Tsy nisy fandrahonana tsunami navoaka ho an'i Hawaii na any amin'ny faritra amorontsiraka Etazonia na Kanadiana.